Quarantine ချိန်မှာ ရို လို့ရလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် Quarantine ချိန်မှာ ရို လို့ရလား?
အခုချိန်မှာ Covid – 19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားတာကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လူတိုင်းလူတိုင်းက အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုတစိုက်နဲ့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်နေသင့်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကနေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ ဘယ်နေရာမှမသွားဘဲ လူစုလူဝေးရှောင်ပြီး ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်ဂူအောင်းနေတာပါပဲ။ ဒီလို ဂူအောင်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ် ဂူအောင်းတဲ့သူလဲရှိမယ်… ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဂူအောင်းတဲ့သူလဲ ရှိမယ်… ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မျိုးနဲ့မတူဘဲ ကိုယ့်ချစ်ချစ်နဲ့တူတူ ဂူအောင်းတဲ့ သူတွေလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေ၊ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေ အဓိက ပါပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ဒီလို လက်ထပ်ပြီးခါစ အိမ်ထောင်သည်တွေ၊ အတူနေစုံတွဲတွေအနေနဲ့ အတူတကွ အိမ်တွင်းပုန်းတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းရှုံ့တာ၊ လက်ကိုင်တာ စသဖြင့် ရိုတဲ့အကွက်တွေ လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုပါတော့။ အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ သိလိုရာမေးကနေ သိထားရမယ့် အဓိက အချက် နှစ်ချက်ကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ အထိအတွေ့ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။ အထိအတွေ့ဆိုတဲ့အထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နေတာ ထိုင်တာ စားတာ သောက်တာနဲ့ လက်ကိုင်၊ ပွေ့ဖက် နမ်းရှုံတာတွေ ပါပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းက အထိအတွေ့က ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ထိမယ့် လူကသာ ပြဿနာပါ။ သဘောက ကိုယ်နီးနီးကပ်ကပ်နေမယ့်သူက ရောဂါကူးစက်ခံမနေရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သူ့မှာသာ ရောဂါမရှိတာသေချာရင်တော့ နမ်းချင်သလောက်နမ်း၊ ဖက်ချင်သလောက်ဖက် ကိစ္စမရှိပေမယ့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာ၊ အဖျားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထဲမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ၃ပေ အကွာကနေ နေထိုင်စားသောက် ထိတွေ့ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့က ခုစပိန်၊ အီတလီစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါပြန့်ပွားမှုကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ Lockdown ချထားတာကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက တော်သေးတယ်လို့ ထင်ပြီး ဘယ်လောက်ပဲ အသိပညာပေးပေး လုပ်ချင်ရာ လုပ်တဲ့ သူတွေရှိနေတာက အမှန်ပါပဲ။ ဟိုတစ်ရက်ကတင် လမ်းပေါ်မှာ အတွဲ ၂တွဲ ၃ တွဲတွေ့နေရတဲ့အခါမှာ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ အပြင်မှာ ဒိတ်လုပ်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီအချိန်မှာ စိတ်ချရဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အိမ်တွင်းအောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် မဖြစ်မနေ ခဏပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ တွေ့ဖို့စိတ်ကူးနေပြီဆိုရင်တော့ တစ်အချက်က Mask ကို မဖြစ်မနေတပ်ဆင်သွားဖို့ နဲ့ နှစ်ဦးစလုံး အဝတ်အစားကို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဆင်သွားဖို့၊ နှစ်အချက်အနေနဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်ဆောင်သွားဖို့ အပြင် သုံးအချက်ကတော့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိတဲ့သူ နည်းလေ၊ အန္တရာယ်ကင်းလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူစုလူဝေးများတဲ့ နေရာတွေကို မသွားဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒိတ်ပြီး အိမ်ပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲ အရင်ဆုံး ဘာကိုမှ မထိခင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်မိသားစုက ရောဂါရသွားတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ခုလိုမျိုး Covid – 19 ကြောင့် အားလုံးထိတ်လန့်နေရတဲ့ အချိန်ကာလမျိုးမှာ ရိုမယ့် ချစ်သူစုံတွဲတွေအနေနဲ့ ဒီအဓိက အချက် ၂ ချက်ကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ခုချိန်မှာ ရောဂါကူးစက်မှုကို တဖက်တလမ်းက ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အိမ်တွင်းမှာပဲနေဖို့ကိုတော့ သိလိုရာမေးကနေ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…